Shaqaalaha qaramada Midoobay oo Mushaar heli doonin bisha Nove... | Universal Somali TV
Shaqaalaha qaramada Midoobay oo Mushaar heli doonin bisha November
Xafiisyada hey,ada qaramada midoobay ay ku leedahay magaalooyinka New York, Geneva, Vienna iyo Nairobi Nairobi ayaa laga yaabaa in saameyntii ugu darneyd ay ku yeelato tobanaan sano kadib waxa loogu yeeray miisaaniyad xumo soo Wajahday.
War saxaafadeed lagu qoray barta Internet-ka ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri qaramada Midoobay ma heysato lacag ku filan oo ay ku bixiso mushaarka shaqaalaha bisha November.
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa Mr António Guterres ayaa bilowgii todobaadkan u sheegay wadamada xubnaha ka ah golaha, in aan la buuxin doonin boosaska shaqada banaan safaradana ay noqon doonaan kuwo xadidan ayna jiri doonin wax kulamo ah oo dhici Doona.
Mr Guterres ayaa intaa ku daray in sanadkaan ay qaadeen talaabooyin adag si loo badbaadiyo qarash badan loona buuxiyo meelaha ka banaan miisaaniyad Sanadadeedka ay ku Shaqeeyaan.
Wadanka Mareykanka oo bixiya 22% boqolkiiba qarajka qaramada midoobay ayaa ka mid ah dalalka aan sanadkaan bixin dhaqaalaha laga doonayay iyadoo lacagta ka miisaaniyada ka maqan ay tahay 674 million oo Doolar.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dood ka keenayay mudooyinkaan in Washington ay mas,uul ka tahay qalqalka ku yimid miisaaniyada sanadkaan waxaana uu ku baaqay in laga arinsado isbadalka Arintaan.
Kan-xigaMadaxweyneyaashii hore ee dalka oo ga...
Kan-horeMadaxweyne Erdogan oo hanjabaad culus...
53,503,711 unique visits